“UNU EKWELA EEDC WEPỤ ỌKỤ UNU!” OTU NUF NA-AGWA NDIGBO MAKA ÌGWÈ NGỤ ỌKỤ ỌHỤRỤ(MITA) EEDC – hoo!haa!!
“UNU EKWELA EEDC WEPỤ ỌKỤ UNU!” OTU NUF NA-AGWA NDIGBO MAKA ÌGWÈ NGỤ ỌKỤ ỌHỤRỤ(MITA) EEDC
Enugwu – Otu Ndigbo United Forum (NUF), agwaala Ndigbo ka ha ekwela ka ndị ụlọ ọrụ EEDC wepụ ọkụ ha.
Otu a pụtara ọhụrụ maka ọdịmma Ndigbo nke jikọrọ ndi ndu Ndigbo si Steeti nile nọ n’Ala-Igbo kwuru nkea n’ozi ha wepụtara ka ha na ndị EEDC nwechara ọgbakọ n’isi ụlọ ọrụ EEDC n’Enugwu ụnyahụ.
Ndị na-amụ ọkụ na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda hụtara otu NUF ka Ọzọ Igbo ndụ” ndị gbatara ọsọ enyemaka iji zọpụta Ndigbo n’aka ” mkpagbu ime ụlọ ndị EEDC ” ebe otu ndị ọzọ n’Ala-Igbo, tinyere ndị isi ụka nile gbara nkịtị.
N’ihi ya, Ndigbo na-adịzị otu a nke Ichie Chukwuma Godson Ezenagu bụ Onyeisi ya, Ichie Chinedu Mba bụrụkwa Onyeisi Oche, otu mgbazi(BOT) ha, ka ha jisike, ghara ịgharịpụ Ndigbo ndị gara iji enweghịzị olileanya were malite ngagharị iwe, ma ọ bụghị maka ọsọ enyemaka NUF.
Ozi ahụ kwuru sị:
“Ndị EEDC kwetara na ha degaara Gọọmenti Etiti akwụkwọ ịnata ikike site n’aka ụlọ ọrụ Nigerian Electricity Regulatory Commission (NERC) maka atụmatụ iwepụ ìgwè ngụ ọkụ (mita) dịbu adị nakwa ụgwọ ọkụ mmagbunye (estimated bills). Kaosiladi, ha enwetaghị ikike ahụ tupu ha amalite atụmatụ ahụ. Nkea gosiri na atụmatụ ahụ megidere iwu.”
Ozi ahụ kwukwara na EEDC kwetara na ọ bụ sọọsọ mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda (Ndigbo) ka atụmatụ ahụ metụtara n’ime Mpaghara nkesa ọkụ (DISCO) iri n’otu dị na Naịjiriya.
Ozi ahụ kọwakwara na ndị EEDC egosighi mwute ọbụla maka “arụ a ha na-akpasa Ndigbo” kama na ha gwara ha na ha chetakwa na “ọ bụ ụmụnne ha Ndị Igbo ibe ha nwe ụlọ ọrụ EEDC”
Ozi kwukwara sị: “Mgbe a jụrụ ihe mere ha ji amanye ndị n’enweghị ìgwè ngụ ọkụ ka ha tinye aka n’akwụkwọ iji sonye n’ịkwụ ụgwọ mmagbunye, ha ekwughị ihe ọbụla”
NUF kpebiziri “iche ruo ụbọchị Fraịdee, abalị iri nke ọnwa Jenụwarị, afọ 2020 iji nweta nzaghachi ụlọ ọrụ EEDC.
” Kaọdịtaa, anyị na-agwa Ndigbo ka ha ekwela onye ọbụla ibupu ìgwè ngụ ọkụ ha n’etinye nke ọhụrụ ozigbo.
“Ha sịrị na ìgwè ngụ ọkụ ọhụrụ bụ N39,000. Ụlọ ọrụ NERC akwadoghi ndị mmadụ ịkwụ ụgwọ ìgwè ngụ ọkụ. N’ihi nke a, a na-enye Ndigbo ndụmọdụ site ugbua ka ha EKWEKWALA kwụọ ụgwọ ọbụla maka ìgwè ngụ ọkụ.
NUF kwukwara na ha “anọchi ụlọ ọrụ EEDC nile na mpaghara a ma hụ ime ihe ha kwuru”
Previous Post: E JIDELA ONYE AKA N’AKPA JI ỌGWỤ EZU
Next Post: “PASTỌ” NA-ENYEZI ỤMỤ AGBỌGHỌ ỊBA EJI ENWETA DI